Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Azul no zotram-piaramanidina ara-potoana indrindra any Brezila
Ny 84.14% ny sidina Azul dia tonga tao anatin'ny 14 minitra sy 59 segondra ny fotoana nahatongavan'izy ireo.
Ny Azul Brazilian Airlines no kaompaniam-piaramanidina ara-potoana indrindra any Brezila ary ny mpitatitra vola lany amin'ny fotoana fohy (LCC) any Amerika. Araka ny voalaza tao amin'ny laharam-pahamehana ofisialin'ny zotram-piaramanidina OAG manerantany, ny 84.14% ny sidina Azul dia tonga tao anatin'ny 14 minitra sy 59 segondra ny fotoana nahatongavan'izy ireo. Ity metrica ara-potoana ity koa dia mahatonga an'i Azul ho LCC fahadimy indrindra indrindra eto an-tany.
“Ity vokatra itarihan'ny orinasa ity dia taratry ny fifantohanay hatrany amin'ny fahombiazan'ny asa. Ny famitana ny taona ho LCC ara-potoana indrindra any Amerika dia mampiseho ny fenitra avo lenta izay ampanantenainay sy atolotray ny mpanjifanay. Ity zava-bita ity dia vao mainka manaitra kokoa raha jerena ny fiasan'ny sidina 800 isan'andro ary manidina amin'ny toerana mihoatra ny 100 isika, izay manodidina ny in-droa ny isan'ny toeran-trano atolotry ny mpifaninana aminay. Te-hisaotra ireo mpiara-miasa aminay aho noho ny fanoloran-tenany sy ny fifantohany amin'ny fanomezana ny traikefa mpanjifa tsara indrindra amin'ny indostria ”, hoy i David Neeleman, mpanorina sy filohan'ny Azul.
Halekulani dia nanendry talen'ny sakafo sy zava-pisotro vaovao